100ML DC 24V 500mA Havitran'ny Humidifier Rivotra ho an'ny saina China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Rivotra Humidifier Air,Sokajin-tsaina Humidifier,Humidifier Air
Home > Products > Home Humidifier > 100ML DC 24V 500mA Havitran&#39;ny Humidifier Rivotra ho an&#39;ny saina
100ML DC 24V 500mA Havitran'ny Humidifier Rivotra ho an'ny saina
Model No.: DT-1508B
RELAX: Fenoy ny habaka dia misy fofona mahafinaritra izay afaka manandratra ny hatezerana ary manamaivana ny adin-tsaina amin'ny andro mampihetsi-po sy mandreraka, diffuser plastika tonga lafatra ho an'ny masking ultrasonic diffuser ny hanitra sy ny hanitra ho an'ny hanitra: Ny humidifier rivotra avo lenta dia novolavolaina amin'ny teknolojia ultrasonic hampiely ny menaka ilaina sy manalefaka ny efitrano. Izy io dia ahitana jiro 7 mitarika loko sy fanamainana menaka manitra aromatherapy. Ny halalin'ny halatra mangatsiaka dia vahaolana mahomby hanaparitaka ny menaka ilaina.
Fahombiazana sy filaminana ao amin'ny faritra anatiny: ny mpandoto trano dia manolotra fiantohana tokana sy voajanahary ao amin'ny biraonao sy ny tranonao amin'ny alàlan'ny famoronana anatiny milamina. Ny solika humidifier solika dia tena manampy amin'ny famoronana toe-po tonga lafatra amin'ny efitrano fatoriana na amin'ny toeram-piasana rehetra.
Jiro LED miloko 7: misy karazana jiro maroloko mitana loko 7 miaraka amin'ny fandriam-pahalemana tanteraka izay mivadika ho azy rehefa mandeha ny rano.
Teknolojia avo lenta avo lenta: Ny onjam-peo ultrasonic 2.4 MHz dia mandeha amin'ny rano ao anaty vaporizer sy menaka ilaina amin'ny natiora. Tsara amin'ny atiny ho an'ny fanadiovana, hamandoana ary ny aromatherapy.
Premium Ultrasonic Humidifier: Ny moistifier manokana dia miasa amin'ny maha-mpandefasa tsy misy tsiny amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fanavaozana ultrasonic amin'ny famoahana fofona tsara sy vaovao ary maivana izay miparitaka eny amin'ny rivotra noho ny famoronana habetsaky ny hamandoana mandanjalanja ao anaty efitrano.
Ultrasonic diffuser: Ultrasonic Aroma diffuser dia vita amin'ny plastika tsy misy kilema an'ny PP ABS. Mametraka menaka ilaina amin'ny menaka ilaina fotsiny ny menaka 3-5 mba hahasoa ny hanitra ankasitrahana.
Mety tsara ho an'ny toerana anatiny rehetra: Ny trano rehetra dia mety tsara amin'ny toerana anatiny toy ny Gym, Home, Spa Center, Office, Workplace, sns .. Mist humidifier no vahaolana farany ho an'ny atitany maina toy ny birao sy ny trano satria izy no mandanja ny haavo amin'ny habetsahan'ny hamandoana.
Mety amin'ny Climates rehetra: Ny menaka tena izy no mahatonga ny tontolo iainana mahafinaritra sy ho tsara saina.
Aroma & Voankazo: mitahiry zava-manitra hatrany hatrany ny atiny. Azonao atao koa ny misafidy ny hanitra maniry ao anaty menaka tena ilaina.
Jiro LED miloko: plastika diffuser dia mitondra fampitandremana tsy manam-paharoa amin'ny atitany miaraka amin'ny jiro LED miova. Manangona ny hamafin'ny faniriana sy loko miaraka amina fanontana bokotra tokana.
Indoor Ultrasonic Auto Aromatherapy Ceramic Humidifier
Mpanodin-tsolika tena ilaina amin'ny menaka sela
500ml malaza Portable Air Conditioner Humidifier
Rivotra Humidifier Air
Rivotra Humidifier Purifier
Rano Humidifier Air
Rivotra diffuser Air
Home Humidifier Air
Rivotra Humidifier sy mpanadio